Ihowuliseyili Plastic Bottle mveliso kunye noMthengisi | ICopak
Inkampani yase Shanghai COPAK ye LTD inemigca yemveliso engaphezulu kweshumi yeebhotile zePET kunye nePLA. Nenkqubo engqongqo yolawulo lomgangatho kunye nenkqubo yolawulo yempilo yokhuseleko kunye nenkqubo, inkampani yethu ibeUmzi-mveliso webhotile yeplastikhi iminyaka emininzi. Sivelisa ikakhulu iikomityi zePET, izitya zokutya zePET, iibhotile zePET kunye neemveliso zePLA.
I-COPAK isungule izixhobo zobuchwephesha obuphambili, kukho izinto ezininzi ezisebenza ngebronzing, umatshini wokuprinta isikrini ngokuzenzekelayo. Ukupakisha ngokwemigangatho yokupakisha amayeza ukuqinisekisa impilo nokhuseleko.
Njenge Umzi-mveliso webhotile yeplastikhi, I-COPAK iqokelele amava atyebileyo ngemveliso yeminyaka emininzi.Silawula ngokungqongqo umgangatho wemveliso ngokusebenzisa inkqubo yolawulo lwenzululwazi. Inkampani ikholelwa ukuba umgangatho wemveliso ligazi elitsha ukugcina umzi-mveliso usebenza.
Ukugcina ikhontrakthi kunye nokugcina ikhredithi kukuzibophelela kwethu kubathengi ngonaphakade. Umgangatho wemveliso ethembekileyo kunye nenkonzo yasemva kokuthengisa ziinjongo zethu ezingapheliyo. Sinethemba lokuphuhlisa
Kunye nabathengi abadala ukuba bakhule kunye nabathengi abatsha kwaye bamkele ngokunyanisekileyo abathengi abatsha nabadala ukuphumelela imeko yokuphumelela kunye nokwenza ikamva eliqaqambileyo.
Ukupakisha i-COPAK kutyalomali kubuchwephesha, abantu kunye neenkqubo ezihambisa izisombululo zokupakisha zeplastiki kwiintlobo ezahlukeneyo zamashishini. Ukusuka kwilebhu yethu yokuyila eyenza ukuba sakhe kwaye sivavanye iipakeji ezintsha ngokukhawuleza kumaqonga amatsha okuvelisa awandisa ukufikelela kweemveliso zethu kunye noluhlu, izinto ezintsha ziziko layo yonke into esiyenzayo. Ngoku sihamba phambili phakathimveliso iibhotile zeplastiki.
Umgangatho ubaluleke kakhulu kwi-copak Umzi-mveliso webhotile yeplastikhi. Iqela lethu lizinikele ekuqinisekiseni ukuba bonke abathengi bafumana ukupakishwa komgangatho imveliso yabo ifuna kwaye ibafanele. Ukusuka kwimigangatho yethu kunye neenkqubo ukuya kubunjineli nakwimveliso, sibeke iitsheki ezininzi kunye neebhalansi endaweni yokuqinisekisa ukuba yonke ibhotile iveliswa kwelona nqanaba liphezulu lomgangatho.
Egqithileyo Izikhongozeli zePET zeplastiki ezineziciko
Okulandelayo: Iibhotile zeplastiki zeJuice
Iitoti zesiselo se-PET
Iibhotile zePET ezenziwe ngokwezifiso
iibhotile zeplastiki zesikwere french